ကလေးသွေးတိုးသည့်အခါ မိဘများသိသင့်သည့် အချက်များ - Hello Sayarwon
ကလေးသွေးတိုးသည့်အခါ မိဘများသိသင့်သည့် အချက်များ
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ?
ကလေးအတွက် သွေးတိုးရောဂါကို လိင်တူ၊ အသက်အရွယ်နှင့်အမြင့်တူနေသော အခြားကလေးတွေ 95 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တူညီ သို့မဟုတ် ပိုကြီးတဲ့ သွေးဖိအားရှိတဲ့ ကလေး တွေပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အသက်၁၀နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါဟာ အများအားဖြင့် အဝလွန်ခြင်း ၊မကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစားစားရခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပိခြင်း စတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေနိုငိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါအချက်များနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ် –
– မကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစားစားရခြင်း
– မိသားစုထဲမှာ သွေးတိုးရာဇဝင်ရှိခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပွားနှုန်းများစေတဲ့ အချက်များက ဘာတွေလဲ?
ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ သွေတိုးရောဂါက နောက်ခံကျန်းမာရေး ပြသနာ ၊ဗီဇ၊ လူနေမှုပဲုစံတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ သွေတိုးရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
ယေဘုယျအားဖြင့်ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါဟာလက္ခဏာ သေချာမပြပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပွားသူ ကလေးတွေကတော့ အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။
သင့်ကလေး မှာ လမစေ့ပဲမွေးခြင်း ၊ အဝလွန်ခြင်း စတဲ့ အန္တရာယ် အချက်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ပါတယ် –
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို ဘယ်လို စမ်းသပ်ရှာဖွေနိင်သလဲ?
တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်က အခြား နောက်ခံအကြောင်းရင်း ရှိမရှိ သေချာအောင် အောက်ပါ စမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်:
– သွေးတွင်း သကြားဓါတ်သိနိုင်ရန် သွေးစစ်ခြင်း , ကျောက်ကပ် လုပ်ဆောင်မှု နှင့် သွေးဆဲလ်အရေအတွက်
– ဆီး စစ်ခြင်း (urinalysis)
တကယ်လို့ ဆရာဝန်က တည်ဆောက်ပုံကြောင့် သွေးတိုးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ သံသယရှိလျှင်, သင့်ကလေးနှလုံးကနေတဆင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
– ကျောက်ကပ် ultrasoundရိုက်ခြင်း
ကုသမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ
ကလေးများအတွက် သွေးတိုးရောဂါကို ဘယ်လို ကုသသလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးတွေအတွက် သွေးတိုးရောဂါ ကုသမှုက လူငယ်တွေမှာ ကုသမှုနှင့် ဆင်တူပါတယ်။ သင့်ကလေးအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုရရှိရန် ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံပြုချက်များရယူသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်များကတော့
– Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) ဆိုတဲ့ အစားသောက်ပုံစံကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါပုံစံမှာ အဆီများတဲ့ အစားအစာနှင့်ပြည့်ဝဆီ လျော့စားခြင်း၊ ပိုမိုလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်အသီးအရွက်များ၊ ဂျုံကြမ်းများ စားသုံးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းက သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ကို တက်စေပြီး သွေးဖိအားတိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေးကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေဖို့ သင့်တော်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ဆရာဝန်ထံမှအကူအညီတောင်းပါ။
ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးငွေ့က သင့်ကလေးသွေးဖိအားကို တက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကလေးနှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေကို တိုက်ရိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေးကို မီးခိုးငွေ့ပင် မရှူ စေမိအောင် စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
ဒီနည်းက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် အခြားကုသမှုတွေ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုမှ အသုံးပြုသင့်ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါကုသတဲ့ ဆေးဝါးတွေက အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးများဟာ ခန္ဓါကိုယ်က ပိုလျှံတဲ့ ဆိုဒီယမ်နဲ့ ရေကို ဆီးကနေတဆင့် ဖယ်ရှားဖို့ကူညီခြင်းအားဖြင့် သွေးထဲတွင်အရည်ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ လုပ်ပေးပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ ဆိုဒီယမ်တွေဖယ်ပေးပြီး အရည်ပမာဏကို လျော့ချပါတယ်။
– ACE inhibitors, alpha-blockers နှင့် calcium channel blockers လို ဆေးတွေက သွေးကြောတွေ ကျဉ်းမသွားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ဒီဆေးတွေက ဟော်မုန်း adrenaline မထွက်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။
ကလေး သွေးတိုးရောဂါကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ?
သင့်ကလေး သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုလုပ်ပါ။
– သင့်ကလေး တီဗီကိုကြည့်ချိန် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပါ
– အစားအစာ အစီအစဉ်ဇယားတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
– သင့်ကလေးကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အားပေးပါ။
– ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သင့်ကလေးသွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။